Network ကိုအချိန်ပရိုတိုကော (NTP)
ဘာဖြစ်သလဲ Network ကိုအချိန်ပရိုတိုကော (NTP)?တစ်ဦး packet ကိုကွန်ယက်ကို switched ကျော်အမှန်မှာကကွန်ပျူတာစနစ်များအကြားနာရီတွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်ဖို့အသုံးပြုကွန်ယက် protocol ကိုပါပဲ။ ဒါဟာနှစ်လယ်ပိုင်း 1980s ဝန်းကျင်ကတည်းကပင်ရဲ့ဝဲတက္ကသိုလ်မှဒါဝိဒ်သည် Mills ကအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ပါတယ်; ဒါကြောင့်အင်တာနက်ပေါ်ရှိနေဆဲန်းကျင်အရှိဆုံးဝါရင့် protocol များ၏တဦးတည်းဖြစ်၏။ NTP အကျိုးခံစားဖို့လေးစားမှုဒါမှမဟုတ်ကြိတ်စက်သတင်းအချက်အလက်ကွန်ရက်ပြေးတွင်တွေ့ရွှေ့ဆိုင်း၏မျိုးစုံမှ acclimating နှင့်အတူအချိန်အရင်းအမြစ်သို့မဟုတ်အချိန်ဆာဗာ၏ဧရိယာ၏အမြင်များတွင်အချိန်ကိုပြောင်းလဲအနည်းငယ်စွမ်းရည်ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါအခြားအချိန်ထပ်တူတီထွင်မှုလှညျ့ စား. နိုငျပါ။
NTP 30 နှစ်အတွင်းယင်း၏နိဒါန်းကြိုတင်ကတည်းကအမျိုးမျိုးသောအပြောင်းအလဲများကြုံတွေ့ခဲ့သည်။ NTP လိုက်လျောညီထွေ0958 ၏စက်တင်ဘာလအတွင်းကို RFC 1985 အတွက်သွင်ပြင်လက္ခဏာခဲ့သည်။ NTPv0 အဆိုပါအများအပြားမီလီစက္ကန်အတွက်အချိန်တိကျပြီးမြောက်နိုင်ဘူး။ 1988 မှာတော့ကို RFC 1059 ဖောက်သည်ဆာဗာနှင့်က Shared mode ကိုများအတွက် NTP ၏ tuning သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်သော NTPv1, သွင်ပြင်လက္ခဏာ။ 1989 မှာတော့ကို RFC 1119 တစ်စီမံခန့်ခွဲမှု protocol ကိုနှင့်အမျှသေးဒီနေ့ရဲ့မူကွဲ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းထားတဲ့အတည်ပြုချက်အစီအစဉ်ကဲ့သို့သောအရာတို့ကိုထည့်သွင်းထားတဲ့ NTPv2, သွင်ပြင်လက္ခဏာ။ 1305 ထွက်လှည့်အရာကို RFC 1992, NTPv3 သွင်ပြင်လက္ခဏာ။ NTPv3 အမျိုးမျိုးသောလည်စည်းသတင်းရပ်ကွက်များအကြားကောက်ဖို့ဖောက်သည်ကူညီပေးသည်ပေးသောအပိုအမှားရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့်စာမေးပွဲ, ပါဝင်သည်။ တစ်ဦးက mode ကိုထိုနည်းတူအကူအညီဖြင့်ခင်မင်သိကျွမ်းခဲ့ပါတယ် communicate ကွန်ယက်မှ Multi-get အပေါ်အချိန်စီးအနင်းလွယ်ကူချောမွေ့။ 2010 မှာတော့ကို RFC 5905 NTPv4 များအတွက်အသေးစိတ်သို့သော် 7822 ၏မတ်လအတွင်းကို RFC 2016 အားဖြင့်အဆင့်မြှင့်ခဲ့ပါတယ်နှင့်အတူဖြန့်ဝေခဲ့သည်။ NTPv4 NTP ၏ပစ္စုပ္ပန်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသေးအခြေခံကွန်ယက်ကို protocol ကိုအဖြစ် IPv3 များအတွက်အားကောင်းပါဝင်သည် NTPv6 အလားတူအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအတိုင်းအတာအထိစောင့်ရှောက်။ verification ဒါ့အပြင်တိုးတက်လာသောနှင့် protocol ကိုပိုပြီးထင်ရှားတဲ့လုံခြုံရေးပေးသည်။
NTP အချိန်သတင်းရင်းမြစ်တစ်ဦးအမျိုးမျိုးသော level အစီအစဉ်အသုံးချ။ အဆိုပါတိုးတက်သောစနစ်၏တစ်ဦးချင်းစီအဆင့်ကိုတစ်ဦးလှာအဖြစ်လူသိများသည်နှင့်သုည (0) နဲ့စတင်မယ့်ကိန်းဂဏန်းတွေလေးစားမှုထွက် doled ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကြိမ်, သတင်းရင်းမြစ်နှင့်လှာအတွက်ပိုမိုမြင့်မားတဲ့အရင်းအမြစ်မှတွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ် (ဂဏန်းလေးစားမှုအတွက်ခေါ်ခဲ့) တို့ပါဝင်သည်အဖြစ်, သင်က၎င်း၏လှာတန်ဖိုးထားဖို့ 1 ထည့်ပါ။ ကျနော်တို့အချိန်အရင်းအမြစ်များ၏ယုံကြည်မှုကိုတစ်ဦးအဆင့်အဖြစ်လှာတန်ဖိုးထားအသုံးချနိုင်ပါတယ်။ သုညအများဆုံးအားကိုးသည် ဖြစ်. , 15 ယုံကြည်စိတ်ချရသောသေးတစ်ချိန်တည်းတစ်ဦးအသုံးဝင်သောအဆင့်မှာနိမ့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ 16 တစ်လှာ unsynchronized ဖြစ်ပြီးအရူးဖြစ်ဟုဆိုသည်။ တစ်ဦးကအဆင့်အထိ 16 လှာ gadget ကသိသိသာသာအချိန်အရင်းအမြစ်မဟုတ်ပါဘူး။ NTP သာမန် Coordinated Universal Time (မဟုတ်ရင် Coordinated သို့မဟုတ် UTC က Universal အချိန်ခေါ်) အတွက်အချိန်ပေးပို့သည်။ ရပ်ကွက်အတွင်းအချိန်များအတွက်အပြောင်းအလဲအနီးအနားမှာအချိန် server ပေါ်မှာဒါမှမဟုတ်ဖောက်သည် gadget ကအပေါ်ဖြစ်နိုင်သောဖြစ်သင့်သည်။
စံတစ်အကျိုးတူများအတွက် NTP ၏ပေးပို့ခြင်း, ဥပမာတစ်ခုအုပ်ချုပ်ရေးအချိန်အရင်းအမြစ်တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချအရင်းအမြစ်မှအရင်းအမြစ်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ, အမျိုးသားစံချိန်စံညွှန်းများ Institute ကနှင့်နည်းပညာကျနော်တို့မှတွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်နိုင်သောကြိမ်ဆာဗာများရှိပါတယ်။ tf.nist.gov/tf-cgi/servers.cgi မှာ, သင်ကအချိန် server ကိုညွှန်ပြရန်အချိန်ဆာဗာများ, ၎င်းတို့၏ဒေသများနှင့် IP တည်နေရာတစ် rundown ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးရပ်ကွက်အတွင်းအချိန် server ကိုနှင့်လှာတိုးဖို့အချိန်ကိုတက်ခူးကြတဲ့အခါမှာ, သင်ထို့နောက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကွန်ယက်ကိုအတွင်းအပြင်အချိန်အရင်းအမြစ်အဖြစ်အသုံးချနိုင်ပါတယ်။ switches နဲ့ switches (Cisco သည်နှင့်အခြားသူများ) ထို့နောက်သင့်အနီးအနားမှာအချိန် server ကနေအချိန်ဆွဲနိုင်ပါသည်, ထိုနောကျမှသူတို့အတိတ် gadgets ကနေအချိန်သတင်းရင်းမြစ်ဖြစ်လာဆီသို့ရွှေ့နိုင်ပါတယ်။ အများစုမှာအဓိကအလုပ်လုပ်စနစ်များကို Windows အပါအဝင် NTP အားကောင်းပါလိမ့်မယ်။ Windows ကို 2000 ကတည်းက Windows ကိုအားလုံးမျိုးကွဲ NTP အသုံးချဖို့အချိန်တွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်မှ Windows ကိုအချိန်န်ဆောင်မှု (W32Time) ရှိခဲ့ပါပြီ။
ဒီနေ့ရဲ့ကွန်ယက်, အချိန်မီလီစက္ကန်သို့မဟုတ်အများအပြားမီလီစက္ကန်အတွင်းပိုင်းညှိဖြစ်သော်လည်း, အဘယ်ကြောင့်နိုင်သနည်း ဒါကမူတည်! ဒါဟာအသုံးပြုသွားမည် applications များနှင့်အချိန်အဘို့မိမိတို့လိုအပ်ချက်များကိုအပေါ်သို့ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဒါဟာ "ပညာရှိ" နာရီရှိခြင်းအီးမေးလ်တစ်စောင် လုပ်. ဒါ့အပြင်ဆည်းပူးအခါကိုသိရန်လုံလောက်သောဖြစ်အံ့သောငှါဖြစ်နိုင်သည်။ မီလီစက္ကန်၏အတွင်းပိုင်း 10s မှအတိအကျဖြစ်ကြောင်းအခြေခံစွမ်းရည်အပေါ်အချိန်တံဆိပ်ခေါင်းများလောက်ပေ။ အဆိုပါ applications များ touchy အများကြီးအပိုဆောင်းအချိန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးအားစုံစမ်းစစ်ဆေးရှုထောင့်ကနေမီလီစက္ကန်အတွင်း၌အချိန်တံဆိပ်ခေါင်းရှိခြင်းကွန်ယက်အတွင်း၌ကိစ္စများဆုံးဖြတ်ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ တန်ဖိုးအား-based application များစဉ်းစားပါ။ အကောင့်တစ်ခုသို့မဟုတ်အခြားဘတ်ဂျက်ဖလှယ်မှုကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်တစ်ဦးကိုပညာရှိနာရီဟော့စပေါ့ထက်ပိုမိုထားရှိခြင်းခဲ့ကြကြောင်းလည်းလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ NTP အသုံးချမှကျောင်းအုပ်ကြီး applications များတစ်ခုမှာလေကြောင်းအခွင့်အာဏာအဘို့အကြီးနှင့်ပုံမှန်ဖောက်သည်အဖြစ်ငါပျံသန်း၌အကြှနျုပျတို့၏လေယာဉ်ခြေရာခံထုတ်ကုန်များနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများမီလီစက္ကန်အထဲမှာအတိအကျရှိသည်နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ ဤသည်လေယာဉ်နှင့်အခြားသူများဖို့နီး၏ဧရိယာအဖြစ်တစ်ဦးစှာတိုးတက်အတွေးရှိသည်ဖို့လေယာဉ်ခြေရာခံရှိသူများခွင့်ပြုထားသည်။
NTP ထက်ပို 30 နှစ်ပေါင်းန်းကျင်ဖြစ်နှင့်သေးလိုအပ်ချက်ဖြည်သော protocol တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာနာရီရှိသည်ဖို့သာမန်ဖြစ်ထွက်လှည့်ထားပါတယ်, ကြှနျုပျတို့အပြုသဘောအချိန်အပေါ်သို့အပေါ်အားကိုး။ NTP ယနေ့နှင့်အတူ, ကျွန်တော်တစ်ဦးကိုပညာရှိအချိန်အရင်းအမြစ်ထက်ပိုရနိုင်နှင့်မီလီစက္ကန့အဆင့်အထိတိကျရ။ သင်ပိုမိုအတိအကျထက်တစ်ခုခုလိုအပ်သောချွတ်အခွင့်အလမ်းတွင်, Precision အချိန်ပရိုတိုကော (PTP) မှကြည့်ရှု ... သို့သော်အခြား post ကိုအဘို့ဖြစ်၏။